RAKOTONARIVO (1913 – 1995) | FJKM Ambonin'Ampamarinana
Teraka tany Ramainandro Faratsiho tamin’ny 24 Septambra 1913 izy. Rainisoavoninarivo sy Rasoatahiry no ray aman-dreniny. Nianatra tao amin’ny Sekolin’ny FFMA tao Ambohijatovo Atsimo izy. Taizan’i Pasteur Rajaobelina tao Atsimon’Imahamasina. Nanambady an’i Rabako Louise izy rehefa namoy ny vadiny voalohany. Fantatsika eto amin’ny Fiangonana ny zanany lahitokana sy ny vady aman-janany.
Nandray ny antso izy ka niomana ho mpitandrina tany amin’ny Ecole Pastorale Ambatomanga, MPF izany. Nanao asan’ny Evanjelistra tany Fenoarivo Be izy. Nampianatra tao amin’ny Ecole Biblique tany Toamasina. Nitondra ny Fiangonana Ambohitrandriamanitra. Voaantso ho Mpitandrina teto Ambonin’Ampamarinana.
Nahery tamin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra. Nambabo ny fon’ny mpitondra ny toriteniny tamin’ny fankalazana ny faha-150 taonan’ny Baiboly teny Imahamasina. Mpitandrina nampiana-tena, nampandroso ny aim-panahin’ny Fiangonana. Nanolotra ny fiainany tamin’ny fanompoana an’Andriamanitra teto. Raiamandreny teo amin’ny distrikan’Ambonin’Ampamarinana sy ny Lohavolana. Fahatsiarovana azy eto Ambonin’Ampamarinana ny nanoratany ny tantaran’ity Fiangonana ity tamin’ny Jobily faha-100 taonan’ny Tranovato Ambonin’Ampamarinana. Lehibe koa ny trano vadim-piangonana eto misy ny Akany. Efa natomboka tamin’ny androny ny ezaka “orgue à tuyaux”, tsangambaton’ny faha-110 taonan’ny Tranovato.
Nitondra ny Fiangonana teto nandritra ny 20 taona izy (1964 – 1984). Izy aza no mbola nijery ny Fiangonana teto miaraka amin’ny tompon’andraikitry ny Synodamparitany nandritra ny roa taona tsy nisian’ny mpitandrina raikitra.